Zvinokonzera uye Mhinduro - Hildegarde De Bingen (PDF) - AFRIKHEPRI
Zvinokonzera uye Mishonga - Hildegarde De Bingen (PDF)
Tarisa Koach Carter (2005)
Zvinokonzera uye Kugadzirisa
Liye maziso emunhu akaitwa mune akafanana nedenga. Chokwadi, mwana weziso anopa kufanana kwezuva; dema kana grey color iro rakatenderedza mwana rakafanana nemwedzi, uye chena iyo iri kunze, ine makore. Iro ziso rakagadzirwa nemoto uye nemvura. Iwo moto uyo unoipa iyo kusingagumi uye simba kuvapo; mvura inomupa kugona.
Kana ropa racho rakawedzera muziso remurume, rinotambidza ziso iri kuona, nekuti inomesa mvura iyo inobvumidza chiratidzo; uye kana paine iropa shoma ipapo, mvura yaifanira kupa munhu simba kuti asaone iyi hunyanzvi, nekuti chii chinofanira kutsigira iro ropa, sembiru, rinomuita zvadaro default.
Ndokusaka, mune vanhu vakuru, kuvonekwa kunoonekera, nekuti moto unovasiya uye mvura yakasanganisa neropa inoderera mavari. Vechidiki vanoona zvakajeka kupfuura vanhu vakuru, nekuti misempha yavo ichine musanganiswa weropa nemvura, sezvo moto nemvura zvisati zvanyanyisa kudzora kupisa uye kutonhora mavari.
Iko hakuna kurwara, Hildegarde de Bingen anoyeuka zvakasimba, asi varume vanorwara, uye varume ava vakasanganiswa mune zvakasikwa izvo, sekungoparira kwavo kushata, zvinofanirawo kutora chikamu chazvo mukurapa; vanofanirwa kuchengetwa zvakazara, muviri nemweya, uye, kunyange kana zvakasikwa zvichigona uye vachiuya kuzovabatsira, zvinowanzoitika muuchenjeri hwavo, kuzvibata kwavo, kuzvidzora kwavo, uchawana mauto anotsigira maitiro ekurapa.
Hingenegard yezvakavanzika uye mishonga yekuBingen
2 nyowani kubva ku € 34,99
1 yakashandiswa kubva € 46,45
kubvira waMay 25, 2020 6:31
Nzira Yakakwana kana kuti Esoteric Kristu (PDF)
Tsamba Dzokufungisisa Kwemashiripiti - Alice Bailey (PDF)
Kutaura kwaThabo Mbeki mu2003 kuUNESCO